Villareal 1-3 Barcelona: Barca oo guul muhiim ah gaartay Dhamaadka Ciyaarta | laacibfm.com
Home Laacib Villareal 1-3 Barcelona: Barca oo guul muhiim ah gaartay Dhamaadka Ciyaarta
kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah oo timid dhamaadka ciyaarta ka gaartay kooxda Villareal kulan ka tirsan Horyaalka Spain oo ku soo dhamaaday 1-3.
Xidigaha kala ah Frenkie de Jong, Memphis Depay iyo Philippe Coutinho ayaa ka caawiyay goolashada kulankan iyadoo fursado kale oo muhiim ah iska qasaarisay kooxda.
labada kooxood ayaa qeyb hore ku kala nastay goolal la’an lakin Bilowgii qeybta labaad Daqiiqadii 48aad Barcelona ayaa hogaanka ku qabatay gool muran dhaliyay. Karoos uu soo dhigay Jordi Alba waxaa helay Memphis Depay kaasoo kubada u dhigay De Jong oo shabaq faaruq ah cusjiyay.
Markii hore goolka waxaa loo diiday inuu offside ahaa laakiin seddex daqiiqo oo ay VAR eegeysay ayaa goolka la ogolaaday inkastoo Memphis Depay uu u muuqday offside markii uu kubada helayay.
Villarreal ayaa ciyaarta ku soo laabatay daqiiqadii 77aad markii ay dhaliyeen goolka barbaraha. Gool sahlan ayay u aheyd kooxda martida loo ahaa iyadoo Samuel Chukwueze uu shabaqa ku taabtay kubada la soo gadaal mariyay daafacyada Barcelona.
daqiiqadii 88aad Waxaa Shabaqa soo taabtay Memphis Depay Kubad dheer uu soo tuuray goolhaye ter Stegen ayay Villarreal xal u weysay taasoo keentay in Memphis Depay uu kubada qaatay islamarkaana shabaqa cusjiyo isagoo sii marayay goolhayaha.
Daqiiqadii labaad ee waqtiga dheeriga ahaa Ayaa Barcelona loo dhigay rigoore markii Coutinho lagu jalaafeeyay xerada ganaaxa. Xiddiga reer Brazil ayaa rigoorada loo dhiibay islamarkaana gool u sarifay guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-3.
Natiijo ahaan Barcelona ayaa hada fadhisa kaalinta 7aad ee kala sareynta horyaalka.
Previous articleMichael Carrick oo soo saaray Liiska Xidigaha Manchester United uu kaga Hortagayo Kooxda Ch
Next articleInter Milan oo guul ka gaartay Venezia iyo Juventus oo Garoonkeeda lagu dubtay, Natiijooyinka Horyaalka Serie A
Lifeasapa uses scholarships to international undergraduate students-- Lifeasapa International Undergraduate Scholarship. Yearly 5 students can get a scholarship. The technical undergraduate programs of the...
Taageerayaasha Premier League oo Wajahaya in Corona Basaboor ku galaan Garoomada